अन्ततः रेलिगेसनमा सरस्वती- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
अन्ततः रेलिगेसनमा सरस्वती
फाल्गुन ३, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — कम्तीमा पनि सरस्वती युवा क्लबले अन्तिम खेलको नतिजा यति ठूलो हारमा सकिन्छ भनेर चिताएको थिएन । सरस्वती युवा संकटाको हातबाट ६–२ ले पराजित रह्यो । यो लिगकै सर्वाधिक गोल भएको खेल रह्यो ।
दोस्रो अन्तिम खेलमै रेलिगेसनमा पर्ने तय भइसकेको थियो, सरस्वती । जति बेला रेफ्री श्रवण लामाले यसपल्टको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको ८७ औं खेल टुंगिएको संकेत गरे, औपचारिक रूपमै सरस्वतीको नाममा जोडिएको ‘ए’ डिभिजनको मान्यता टुंगियो ।
दुःखको संयोग कस्तो रह्यो भने सरस्वतीका पूर्णबहादुर श्रेष्ठले ६५ औं मिनेटमा गरेको आत्मघाती गोल नै यसपालिको लिगको दुई सय गोल रह्यो । पूरा लिगमा सरस्वतीले यस्तो यात्रा तय गरेको थियो कि धेरैलाई लागिरहेको थियो, यो नै त्यो अभागी टिम हो । जुन एकमात्र रेलिगेसनमा पर्ने टिम हुनेछ । नभन्दै त्यही भयो । सुरुका तीन खेलमा कुनै गोल नै गर्न सकेको थिएन । त्यसो त प्रशिक्षक प्रदीप नेपालले सुरुदेखि नै दाबी गरिरहेका थिए, अझै केही खेल बाँकी छन् । सरस्वती सम्हाल्न सफल रहनेछ तर सरस्वतीले सम्हाल्नै सकेन ।
नवौं चरणको खेलमा हिमालयन शेर्पालाई ४–३ ले पराजित गर्दा झिनो आस तयार भएको थियो । त्यसपछि टिम लगातार ४ खेलमा पराजित भयो । ‘क्लब र मेरा लागि सरस्वती रेलिगेसनमा पर्नु निकै दुःखद हो,’ प्रशिक्षक नेपालले स्विकारे, ‘यो पीडादायी छ ।’ वास्तवमै सरस्वती किन रेलिगेसन किन पर्‍यो त ? यसमा उनको जवाफ थियो, ‘हाम्रो अग्रपंक्ति नै चल्न सकेन अनि निर्णायक मोडमा हाम्रो डिफेन्स पनि कमजोर साबित भयो ।’
प्रदीप नेपाल, प्रशिक्षक- सरस्वती युवा क्लब
नेपालले थपे, ‘मैले फुटबल खेल्दा पर्याप्त पैसा थिएन । तर हामी निकै परिश्रम गरेर खेल्थ्यौं । अहिले पैसा धेरै छ, तर खेलाडीले मिहिनेत नै गर्दैनन् । मेरो अनुभवमा अहिलेका पुस्ताका खेलाडीमा त्यो भावना नै छैन । जस्तो हामीमा थियो र हामी त्यसैअनुसार खेल्थ्यौं ।’ हुन पनि पूरा लिगमा जम्माजम्मी १० गोल गरेर कुन टिमबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? यसमा ६ गोल कजिम एडेगोडेले गरे । विनोद केसीको नाममा दुई गोल रह्यो । बरु उल्टै सरस्वतीले ३६ गोल खायो । १३ खेलबाट ४ अंकमै चित्त बुझायो ।
यसपल्ट सरस्वतीले गरेको सबैभन्दा ठूलो भूल रह्यो, धेरै प्रयोग गर्नु । उसले लिगमा २५ खेलाडी उतारेको थियो । यो प्रतियोगितामा कुनै टिमले प्रयोग गरेको सबैभन्दा बढी खेलाडी रह्यो । यसमध्ये खाली दुई खेलाडीले मात्र सबै खेल खेले । त्यो डिफेन्डरद्वय सुसन लामा र विनोदको थियो । त्यसमाथि विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पनि सरस्वतीले हतार गरेको थियो, जसका कारण उसका विदेशी खेलाडी अपेक्षाअनुसार रहेनन्, तिनले औसत नै खेले । यही लिगकै क्रममा सरस्वतीमाथि ‘म्याच फिक्सिङ’ को कुनै न कुनै रूपमा कालो धब्बा पनि लाग्यो । उसका दीपेश श्रेष्ठले ख्याल–ख्यालमै सही होला हिमालयनका गोलरक्षक किशोर गिरीलाई मिलेर खेल्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यही कारण कारवाहीस्वरूप दीपेशले अन्तिम तीन खेल खेल्ने पाएनन् । यसअघि यी मिडफिल्डर सरस्वतीका लागि १० खेलमा पूरा ९० मिनेट खेल्ने एकमात्र खेलाडी थिए । सरस्वतीलाई बरू उल्टै एपीएफ र फ्रेन्ड्सबीचको खेलको नतिजामा गुनासो रह्यो ।
त्यो खेल एपीएफले ५–२ ले जितेको थियो । त्यसलगत्तै सरस्वती च्यासलको हातबाट २–१ ले पराजित रह्यो । ‘मलाई एपीएफ जितेको त्यो खेलको नतिजामा चित्त दुखेको छ,’ घुमाउरो पारामा प्रशिक्षक नेपालले पनि माने । सरस्वतीका केही पदाधिकारीले सामाजिक सन्जालमै सही, भनेका छन्, ‘हामी फेरि ‘ए’ डिभिजनमा फर्कने छौं ।’ तर यो काम त्यति सजिलो हुने छैन । अनि तय के पनि छ भने सरस्वतीको व्यवस्थापनले अहिले जसरी काम गरेको छ, त्यो ‘ए’ डिभिजनमा टिकिरहन पर्याप्त छैन ।
सरस्वतीका लागि खेलेका खेलाडी
राज शाही, दीपेश श्रेष्ठ, सुसन लामा, रमेश तामाङ, विनोद केसी, मनीष थापा, वर्षात गुरुङ, सन्तबहादुर गुरुङ, विष्णुकुमार केसी, हिसुब थपलिया, दीपक भुसाल, तीर्थबहादुर बस्नेत, दीपक गुप्ता, कृष्ण रानाभाट, सविन खड्का, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, प्रदीप भण्डारी, मेसक एबेल, एमबेइ एन्ड्रे, राजकुमार घिसिङ, निशान माझी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, निमान तामाङ, कजिम एडेगोडे र सुनील घलान ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:५२
छरिता घर, चिटिक्क आँगन
फाल्गुन ३, २०७६ जितेन्द्र साह
(मोरङ) — विभिन्न संस्कार र परम्परागत कर्महरूमा उपयोगी आँगन चिटिक्क पार्ने चलन छ । सहरमा उति नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तै चलन छ । घर वा मन्दिर अघिल्तिर हुने आँगन लिपपोत गरी चिटिक्क पारिन्छ । धेरैतिर त्यसको छेउमा माटाको चुल्हो पनि बनाइएको हुन्छ ।
धार्मिक विधिहरू आयोजना गर्न फराकिलो आँगन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो एउटा घर परिसरको संरचनामात्र नभइ संस्कारकै रुपमा स्थापित छ । ‘हाम्रो समुदायमा धर्म, संस्कृति, परम्परा र शिष्टता निर्वाह गर्न आँगन नभइ हुन्न,’ ७० वर्षीया लगनदेवी राजवंशी भन्छिन् । धनपालथान गाउँपालिका ६, दादरबैरिया बस्तीको मुख्य सडकछेउ उनको घर छ ।
‘पुजापाठ गर्न र चाडबाडमा पशुपंक्षीको बली दिन पनि आँगन चाहिन्छ,’ लगनदेवी भन्छिन्, ‘यहीं धान उसिन्छौं, भक्का, बगिया, च्यूरा र भुजा पनि तयार पार्छौं ।’ तराईका अधिकांश आदिवासी समुदायको छरिता घरका भित्तामा विभिन्न आकर्षक कलाले सजाइएको हुन्छ । स्थानीय बोलीमा आँगनलाई ‘ऐंगना ’ वा अंगना भन्ने गरिएको छ । छोरीचेलीको बिहेको महत्वपूर्ण विधि सम्पन्न गर्न चाहिने बाँस, पराल एवं रंगीचंगी कागजले बनाइने अस्थायी टहराझैं मण्डप मरवाका लागि पनि आँगन नै प्रयोग हुन्छ । ‘बिहेपछि पहिलो पटक छोरीज्वाइँ सँगै आउँदासम्म आँगनको मरवालाई नभत्काउने चलन छ,’ लगनदेवी भन्छिन् ।
आदिवासी राजवंशी बहुल दादरबैरिया बस्तीमा कसैको त घरले ओगटेजतिकै जग्गामा वा त्योभन्दा ठूलो भूभागमा आँगन छ । ६० वर्षीया लीलादेवी राजवंशीले १० धुरमा घर र त्यतिमै आँगन बनाएकी छन् । ‘जीवनदेखि मृत्युसम्मको संस्कार आँगनमै हुन्छ, नवजात शिशुलाई यहीं बसेर तेल लगाइन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘खेतको उत्पादनको बन्दोबस्ती पनि यहीं गर्छौं ।’ ३० वर्षीया राधा आचार्य राजवंशीको कच्ची घरमा चुलोसहितको सुन्दर आँगन छ र यहींको एक कुना उनको स्कुटी राख्ने थलो पनि हो । ‘हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको छ, उहिलेको जस्तो त धर्मसंस्कारको निर्वाह गर्न सम्भव छैन तर सकेसम्म आँगन संस्कृतिलाई जोगाइरहेका छौं,’राधा भन्छिन् । कटहरीको जुडीमा माइती भएकी उनले दादरबैरियाको चन्द्रकिशोर राजवंशीसँग अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकी हुन् ।
आचार्यसँग विहे गरेकी राधाको आमा राजवंशी जातिकै हुन् । ‘बाआमाले एक अर्काको संस्कृतिको धेरै सम्मान गर्छन, स्वतःस्फूर्त यो संस्कार ममा पनि आएको छ,’ उनी भन्छिन् । संस्कृतिका धनी आफ्नो समुदायले कुल देउताको पुजादेखि महत्त्वपूर्ण पर्वको विधि एवं जमघट आँगनमै गर्ने गरेको स्थानीय ५८ वर्षीय तीनटापु राजवंशीले बताए । ‘सानो भए पनि राख्नैपर्छ,’ उनी भन्छन् । सीमान्तकृत आदिवासी समुदायका राजवंशीको जनसंख्या मोरङमा ५० हजार छ । मुलुकभर १ लाख १५ हजार २ सय ५२ राजवंशी रहेको २०६८ को जनगणनामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:५०